R/Wasaare Khayre oo Xafiiskiisa isugu yeeray Safiirada Caalamka ka jooga Soomaaliya.
Wararka aan ka heleeno Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa ay sheegayaan in Safiirada caalamka u jooga Soomaaliya looga yeeray
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyrre ayaa lagu wadaa in Maanta uu kulan gaar Xafiiskiisa kula qaato Safiiradda Beesha Caalamka u jooga Soomaaliya,waxaana uu kala hadli doonaa Ammaanka Dalka iyo sida Shabaab looga saari doono Qeybaha ay ka joogaa Soomaaliya.
Sidoo kale kulan u dhexeeya Safiiradda Wadamada Caalamka u jooga Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu hor-dhac u yahay Shir looga hadlayo Ammaanka Guud ee Dalka Soomaaliya islamarkaana 4 December lagu qaban doono Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in Dalka ay ka saari doonto Al-shabaab,waxaana Madaxda Dowladda ay sheegeen in Dagaal ay ku mideysan yihiin Dowladda iyo Shacabkeeda ay qaadi doonaan si Shabaab looga xoreeyo Guud ahaan qeybaha ay ka joogaan Dalka.
Al-shabaab oo Weeraro Qaraxyo ah isla markaana markasta Galaafta Nolosha Dad Shacab ah oo aan waxba galabsan ka geysta Magaalada Muqdishoo iyo qaar kamida Gobolada Dalka ayaa Maamula Gobolka Jubbada Dhexe iyo Degmooyin kale oo ku yaalla Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ku bixineysa sidii ay usugi laheyd amaanka Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka waxaan dadlka saaxibada dhaw la ah Soomaaliya kala kashaneysa in ay ka tageraan dhinaca amaanka dalka.(Axadle)